Thola ukuthi amakhasimende bathini ngawe
Isikhungo Sobunhloli Samakhasimende seLithium: Kusuka Kumakhasimende kuye KumaSuperfans
NgoLwesine, July 26, 2012 NgeSonto, Septhemba 8, 2013 Douglas Karr
Ezweni lanamuhla eligxile kwezenhlalo, lokho amakhasimende akushoyo ngalo mkhiqizo kukhiqiza ukudonsa okuningi kakhulu kunalokho okukhishwa ngumkhangiso noma okuqukethwe okukhokhelwayo. Akumangalisi ukuthi abathengisi baqinisa izindlebe zabo ukuzama ukuqonda ukuthi ikhasimende lithini ngomkhiqizo ngaphezu komkhakha wezenhlalo. LithiumIzixazululo zokuqapha imidiya yezenhlalo zesikhathi sangempela zivumela umthengisi ukuthi alalele, alinganise futhi alandele izwi lekhasimende.
Isikhungo Se-Lithium Customer Intelligence ikunikeza amathuluzi wokuhlaziya imisebenzi yezenhlalo futhi udale ukuzibandakanya kwamakhasimende okujulile kuyo yonke iMiphakathi yeLithium, i-Facebook, i-Twitter, nezigidi zamasayithi kuyo yonke iwebhu yezenhlalo. Sihlanganise umphakathi analytics, ezokuxhumana analytics, kanye nokuzibandakanya kwezokuxhumana komphakathi ku-interface eyodwa, edidiyelwe ukwenza kube lula ukusuka ekuqondeni kuye esenzweni.
Enhliziyweni yesisombululo sokuqapha imithombo yezokuxhumana yeLithium yideshibhodi. Lapho umsebenzisi enza ukusesha esebenzisa igama lomkhiqizo noma elinye igama elingukhiye, iLithium ihlwaya amanethiwekhi ahlukahlukene wezokuxhumana futhi igcwalise ideshibhodi ngohlu lwezikhala noma izingcaphuno lapho kutholakala khona igama elingukhiye. Ideshibhodi ibuye inikeze amagrafu asebenzayo analytics emiphumeleni. Injini ibhekela idatha yesikhathi sangempela nedatha engokomlando futhi ihlanganisa amabhulogi angaphezu kwezigidi eziyi-100, amasayithi okwabelana ngezithombe namavidiyo, izingosi zezindaba ezijwayelekile nezinkundla ngaphandle kwamawebhusayithi athandwayo ezokuxhumana nabantu njenge-Facebook ne-Twitter.
Kusuka kudatha yosesho, injini yeLithium ikhipha amagama anjenge izifiso, Ufuna, uthanda, Futhi inzondo ukulandelela imizwa ngokuzenzakalela. Umakethi angafaka umsebenzi wokubhala ngaphezulu komuntu ukuze ahlaziye ukulandelela kwemizwa enjalo. Kukhona futhi umbono onethonya ovumela umsebenzisi ukuthi akhombe abalandeli nabalandeli abanethonya elikhulu emphakathini, okukuvumela ukuthi uqonde ukuthi ikhasimende lingubani nokuthi kungaba namuphi umthelela lapho uxazulula inkinga noma ubeke amazwana ngempendulo ngendlela bangakujabulela futhi basakaze izwi ku.
Ngisho nokubheka okusobala kwedeshibhodi kuzovumela umthengisi ukuthi aqonde imizwa yamakhasimende isiyonke. Ucwaningo oluningiliziwe luzovumela umthengisi ukuthi angagcini nje ngokwenza ukungenelela okufanelekile ukuze ahlanganyele ikhasimende kangcono futhi alondoloze idumela kepha futhi aqonde noma yiziphi izinkinga ezisenkingeni yenqubo yebhizinisi. Isibonelo, umuzwa ongemuhle ovela endaweni ethile ungaba yimbangela yokufunwa komphefumulo, okungagcina sekudale le nkinga ekulethweni okungafanele!
Usebenzisa i-Lithium Customer Intelligence, unga:
Thuthukisa ukusebenza kwezinhlelo zomphakathi: Khulisa amazinga wokuzibandakanya we-peerto-peer futhi uqinisekise ukuthi izinsizakusebenza ezinhle ziphendula ngqo kokuthunyelwe kwezokuxhumana
Khomba futhi Uhlakulele Abathonya: Shintsha abalandeli babe ngabalandeli abakhulu abasebenza njengezandiso zamathimba wakho wokumaketha, wokuthengisa nowokusekela
Yiba Isikhungo Sokuqonda Komphakathi: Gcina umunwe wakho ekushayweni kwezihloko ezishisayo, ukuqonda komkhiqizo, nemisebenzi yokuncintisana
Ukusetshenziswa kweLithium kudlulela ngaphezu kokuqapha komphakathi. Ukondla igama lomncintiswano njengegama elingukhiye kuvumela umthengisi ukuthi aqonde ukuthi amakhasimende nomphakathi jikelele bahlobana kanjani nabancintisana nabo! Noma unganqumi ukusebenzisa ipulatifomu yabo, qiniseka ukuthi ubabheka izinsiza ezingakholeki ezinkundleni zokuxhumana, ithonya, ubuhlakani bamakhasimende, njll.
I-Gold Rush Yezizinda Eziphezulu
Ubuciko Bokungena Kwamaselula